प्रधानमन्त्री ओलीको खातामा दुई वर्षमा ३५ लाख रुपैया थपियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
प्रधानमन्त्री ओलीको खातामा दुई वर्षमा ३५ लाख रुपैया थपियो
बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, १० जेठ । बुधवार सार्वजनिक भएको सम्पति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति दुर्इ वर्षमा बढेको देखिएको छ छ। प्रधानमन्त्रीले ०७२ सालमा सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरण र अहिलेको विवरणमा ३५ लाख रुपैया नगद मौज्दात र ४ तोला सुन बढेको देखिएको छ । पहिलोपटक प्रधामन्त्री हुँदा ओलीको नगद मौज्दात ७ लाख रुपैयाँ मात्रै एभरेस्ट बैंकमा बचत रहेको देखाइएको थियो भने यसपटकको कार्यकालमा भने ३५ लाख थप भएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तैमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकमा रहेको मौज्दात आफ्नो तलब भत्ता भनेर उल्लेख गरेका छन् । दुर्इ वर्षमै ३५ लाख थप बचत कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सुन समेत ४ तोलाले बढेको देखिन्छ । ०७२ सालमा १४ तोला सुन रहेको खुलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भने १८ तोला सुन रहेको विवरण दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यको नाउँमा भक्तपुर स्थित घर लगायत अन्य सम्पति समेत देखाइएको छ । शाक्यको नाममा माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख र प्रभु बैंकमा ६ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात छ भने राष्ट्रिय बचतपत्रमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीपत्नी शाक्य भने नेपाल राष्ट्र बैकको प्रथम श्रेणीका पूर्वअधिकृत भएको खुलाइएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: सुटुक्क नेपाल आएर खुसुक्क किन फर्किए बलिउड कलाकार राजपाल
NEXT POST Next post: पर्यटकलाई लोभ्याउँदै जलविरे झरना
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १४:३४